China Mobile Germ-kuuraya Robhoti PulseIn-D Kugadzira uye Fekitori | Doneax
Nhare yeGerm-inouraya Mabhoti PulseIn-D
1) Pulsestrike 360 ​​pulsed xenon mwenje
2) Zviuru zvakapetwa kupfuura echinyakare mercury B2ltraviolet mwenje, inovhara yakakwana sterilization spectrum (200-315nm)
3) Inoshanda, inochengetedza zvakatipoteredza, inokurumidza (maminetsi mashanu chete)
4) Iyo disinfection radius inogona kusvika 3 metres, ichiuraya superbugs dzakadai saCRE, VRE uye MRSA mumaminetsi.
5) Hapana kukuvara kwemidziyo uye zviridzwa zvinokonzerwa nechitonho mwenje, yakagadzirira kushandisa
6) Inonyanya kuuraya hutachiona. Hapana pathogen ine hutachiona kune yakasimba pulsed mwenje
Technical Parameter dzePulse Ultraviolet Sterilizer
(Disinfection robhoti) PulseIn-D
1 Pulse xenon mwenje
1.1 Yakavakirwa-mukati xenon mwenje chubhu inogadzira pulsed yakasimba mwenje
1.2 Chiedza-chinoburitsa arc kureba ≥ 37.5 cm
1.3 Electrode kupatsanurana ≥ 3.5 cm
1.4 Yakajeka frequency ≥ 2 Hz; magetsi pamusoro pemagetsi the 3000V
1.5 Mwenje kupomba kwakajeka hupenyu ≥ mamirioni matatu nguva
2 Yakakwira magetsi kuburitsa capacitor
2.1 Kubhadharisa uye kuburitsa nguva ≥ makumi mashanu emamiriyoni nguva
2.2 Iyo sisitimu inozviona yega chinzvimbo chekuburitsa capacitor uye zvinokuyeuchidza iwe kutsiva iyo yapera kuburitsa capacitor
3 Simba reSystem
3.1 Inzwa Zvinotaurwa voltage: 220V / 50HZ
3.2 Simba rekuisa ≥1200W
4 Disinfection chinhu
▲ 4.1 Iyo disinfection chinhu izere-bhendi kupomba kutonhora mwenje inosanganisira ultraviolet mwenje mune 200nm-315nm bhendi.
▲ 4.2 Simba repulsed ultraviolet mwenje ine wavelength ye250nm-280nm inofanira kunge iri> 62000uw / ​​cm2 pa1 mita (mushumo weyedzo wakapihwa)
5 Disinfection mhedzisiro (ipa bvunzo mushumo)
5.1 Huwandu hwekuuraya kweMRSA pamusoro pechinhu chiri pamamita matatu mushure memaminitsi mashanu emagetsi ndeye ≥ 99.9%
5.2 Chiyero chekuuraya mabhakitiriya echisikigo pamusoro pemamita matatu mushure memaminitsi mashanu emagetsi ≥ 99.0%
5.3 Huwandu hwekuuraya kweAcetinobacter baumannii ≥ 99.9% pamamita matatu mushure mekuvhenekerwa kwemaminitsi mashanu.
6 Nguva yekubvisa hutachiona
6.1 Iyo nguva yekuuraya disinfection inogona kumisirwa kumaminetsi mashanu, uye iyo disinfection radius iri ≥ 3 metres, iyo inoiswa zvinoenderana nechinhu chinofanira kuiswa utachiona uye saizi yekamuri.
7. Smart mwenje inosimudza chikamu
.1 7.1 Mwenje unozongoerekana wasimuka wobva wawa zvinoenderana nemiraidzo yesisitimu uye chinzvimbo chekushanda, uye kukwirira kwekushanda kuri -165cm.
7.2 Mwenje hupenyu hwekuzviongorora, iyo system inozvirangaridza ichitsiva mwenje wapera
7.3 Kunze kwetirhubhu yerambi inotora inopinza yakakwira-kubvumidza girazi re quartz, yakakwira-kubvumidza disinfection uye sterilization mwenje, yakatemwa 200NM
Iyo inotevera mwenje inopfuudzwa kudzivirira ozone chizvarwa kure kure nemwenje chubhu.
4 7.4 Yeozone firita uye kuora mambure yakaiswa pamusoro petabhu chubhu kuora uye kusefa iyo ozone inogadzirwa munzvimbo iri padyo nemwenje chubhu; iyo ozone yevasungwa mushure mekuuraya disinfection uye sterilization iri <0.08mg / m³ (test test yakapihwa)
8. Iyo yekunze girazi pamusoro inoumbwa kuita idenderedzwa inoratidzira pamusoro neiyo furuji kuti iwedzere simba rechiedza chinopenya kunze uye kuwedzera
Kunyanya disinfection mhedzisiro
9. Iyo sisitimu yakagadzirira kushandisa: kushandisa pulse flicker kuburitsa yakasimba inotonhora mwenje, hapana kukuvara kune yakasheneserwa michina, simbi mapurasitiki, madziro machira uye dzimwe nharaunda.
10. 7 inch smart capacitive inobata skrini
10.1 Iyo software yeiyo yekubata skrini ine basa rekuyeuchidza kupedzisa kwehutachiona, kusimudza mwenje, kudzikisa mwenje, kutanga kupenya, kumisa kupenya, kuisa system, paramende kumisikidza, nezvimwe.
10.2 Iyo software yeiyo yekubata skrini ine akangwara manejimendi basa, otomatiki anonyora akakodzera data yega yega disinfection,
Iyo sisitimu inongotora yega data yemumwe module yechirongwa uye ine otomatiki alarm basa.
10.3 Iyo 7-inch flat-panel remote control ine zvakafanana mabasa seyemubati wekubata skrini.
11. Ruzha rwemuchina wese ≤ 65DB
12. Kurema kwemambure kwemuchina i65KG, uye kurongedza kuri 100KG.
13. Mugadziri apfuura ISO9001 certification
▲ 14. Iyo yechigadzirwa modhi yapfuura CE chitupa; chigadzirwa chine patent chitupa; chigadzirwa chakapfuura mushumo mutsva wekutsvaga.
▲ 15. Dzimba> zvipatara gumi pamusoro peClass III zvakaisa chinzvimbo.
Kukura kwemuchina: 55cm upamhi, 72cm kureba, 115cm kukwirira;
17. Warranty nguva yemuiti uye xenon mwenje chubhu: mwedzi gumi nemiviri.
Iyo PulseIn-D yakateedzana yeiyo pulsed xenon UV sterilizer (germicidal marobhoti) yakaburitsa yakazara-yakasarudzika yakasimba yakasimba pulsed mwenje (inosanganisira yakazara-bhendi ultraviolet mwenje, kunyanya 200nm-320nm) kuburikidza nemagariro eXenon mwenje, uye kunyanya kupfuura yakafara-simba, yakakwira-simba pulsed ultraviolet mwenje Irradiation inoparadza microbial DNA kana RNA yekuparadza hutachiona kana hutachiona hutachiona, kuti ibudirire uye nekukurumidza disinfection yemavirusi, fungi, mabhakitiriya, spores uye zvimwe zvipuka. Icho chigadzirwa chinopa yakachengeteka, inokurumidza uye inoshanda sterilization uye disinfection kurapwa nzira, iyo inogona kudzikisira zvakanyanya hutachiona hutachiona munzvimbo yezvokurapa uye zvehutano masangano uye kudzikisa hutachiona hwehutachiona hwehutachiona (HAIs) ezvokurapa uye zvehutano masangano.
Iyo pulsed xenon UV sterilizer (germicidal marobhoti) inogadzirwa nekambani yedu inogona kudzora zvakanyanya hutachiona mumamiriro ekurapa uye ehutano nekukurumidza kuuraya utachiona hwakadai sehutachiona, fungi, bhakitiriya uye spores. Inogona kushandiswa zvakanyanya kumasangano ekurapa pamatanho ese. Inogona nemazvo kudzikisa chipatara hutachiona hwehutachiona (HAI) yemasangano ekurapa pamatanho ese nekukurumidza sterilization uye disinfection yepasi pezvinhu nemhepo.
Sterilization mhedzisiro yezvigadzirwa
Iyo yakasimbiswa bactericidal athari inoratidzwa mune inotevera tafura:
Methicillin inopikisa Staphylococcus aureus (MRSA)
Vancomycin inodzivirira enterococci (VRE)
Yakasundirwa xenon mwenje 1. Yakavakirwa-mukati xenon mwenje chubhu inogadzira pulsed yakasimba mwenje 2. Chiedza-chinoburitsa arc kureba ≥ 37.5 cm 3. Electrode spacing ≥ 3.5 cm 4. Luminous frequency ≥ 2 Hz; voltage pane iyo electrode ≥ 3000V 5. Rambi rinopomba rinovhenekera hupenyu ≥ mamirioni matatu nguva
Yakakwira voltage kuburitsa capacitor 1 .Kubhadharisa uye kuburitsa nguva ≥ emamirioni makumi mashanu nguva. Iyo sisitimu inozviona yega mamiriro eiyo anobuda capacitor uye zvinokuyeuchidza iwe kutsiva iyo yapera kuburitsa capacitor.
Simba reSystem 1.Input voltage: 220V / 50HZ 2.Input simba ≥1200W
Disinfection chinhu 1 .Iyo disinfection chinhu izere-wavelength kupomba kutonhora mwenje, kusanganisira ultraviolet mwenje mune 200nm-315nm bhendi 2. Simba remapulsed ultraviolet mwaranzi ine wavelengths e250nm-280nm inofanira kunge iri> 62000uw / ​​cm2 pa1 mita (bvunzo yekuedzwa yakapihwa) Disinfection mhedzisiro (ipa bvunzo mushumo) Chiyero chekuuraya mabhakitiriya echisikigo pamusoro pemamita matatu mushure memaminitsi mashanu emagetsi ≥ 99.0%
7 padiki akangwara capacitive kubatwa chidzitiro
Mugadziri apfuura ISO9001 certification
Iyo yechigadzirwa modhi yapfuura CE chitupa; chigadzirwa chine patent chitupa; chigadzirwa chakapfuura mushumo mutsva wekutsvaga.
1. Kurumidza kutapudza utachiona: Nzira yekukurumidza yekuuraya hutachiona mune imwe nzvimbo inogona kuuraya Ebola, C. diff, MRSA, CRE nemamwe hutachiona uye hutachiona husinga peri.
2. Kushanda kwepamusoro kushanda: maminetsi mashanu anogona kupedzisa disinfection basa re25 m²; Maminitsi makumi matatu anogona kugadzirisa iyo 150 m²;
3. Kuvhiya kuri nyore: hapana chikonzero chekushanda kwenyanzvi, manesi, manesi uye vashandi vekuchenesa vanogona kushanda mushure mekudzidziswa kupedzisa kuuraya;
4. Hapana mhedzisiro: hapana kusvibiswa, hapana makemikari masara;
5. Hapana kukuvara: Iyo inotonhora mwenje tekinoroji inoshandiswa kuti isakanganisa mashandiro uye pamusoro pemidziyo yezvokurapa; iyo murume-muchina inopatsanurwa panguva yekushandisa, uye iyo isina waya remote control inoshandiswa kudzivirira kukuvara kumuviri wemunhu;
6.Nyore: yakagadzirira kushandisa, disinfect chero nguva.
55cm yakafara, 72cm kureba, 115cm kukwirira
Warranty nguva yemugadziri uye xenon mwenje chubhu
Mwedzi gumi nembiri
Iyo nguva yekuuraya hutachiona
inogona kuiswa kumaminitsi mashanu, uye disinfection radius iri ≥ 3 metres, inoiswa maererano nechinhu kune
utachiona uye kukura kwemba yacho
Kana michina ikafamba mundege, edza kusundira michina uye usadhonza michina, sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pazasi:
kukanganisa kufamba Mufananidzo
Iyo midziyo inofamba mundege. Kana paine paburi rakakura kana kuburitsa, inofanirwa kufambisirwa kumberi netsoka, kuitira kuti michina ipfuure nepakati, uye mubato haugone kudhonzwa zvakaoma. Sezvinoratidzwa pazasi:
kukanganisa kwekufamba kwe groove
kufamba chaiko kwe groove
Kana chishandiso chikapfuura nemukwidza, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kana uchifambisa mudziyo, unofanira kumira pamberi pechigadzirwa uye dhonza dhizaini kumusoro, uye kona yekukomberedza yechigadzirwa haikwanise kudarika madhigirii makumi matatu. Sezvinoratidzwa pazasi:
Cherechedza: Yeuka! Usasundire chiridzwa shure kwayo kana iwe uchikwira kukwira mutserendende!
Kana chishandiso chikapfuura nematanho epamusoro uye ezasi, vanhu vazhinji vanofanirwa kusimudza mudziyo, uye zvinorambidzwa kumanikidza kukwevera mudziyo kumusoro padanho, sezvakaratidzwa pasi apa:
Inowanikwa yeiyo irradiation maitiro
Pashure: AI Germ-kuuraya Mabhoti AIStrike
Zvadaro: Nhare Yemhepo Kunatsa Disinfector AirH-Y600H
Ai Disinfection Robhoti
Disinfection Machine Yechipatara
Chipatara Midziyo Yekurapa
Chipatara Sterilization Equipment
Chipatara Kubereka Uv Trolley
Chipatara Sterilizer Disfector
Chipatara Uv Sterilizer
Akangwara Disinfection Robhoti
Inotakurika UV Sterilizer
Pulsed Chiedza Sterilizer
Pulsed Ultraviolet Disinfection Robhoti
Yakasimudzwa Xenon Uv Lamp
Yakasimudzwa Xenon Uv Mabhoti
Yakasimudzwa Xenon Uv Sisitimu
Yakasimudzwa Xenon Uvd Robhoti
Chikoro Robhoti Disinfection
Sterilizer Machine Yechipatara
Ultraviolet Disinfection Robhoti
UV Disinfection Lamp Yechipatara
UV Disinfection Lamp Robhoti
Uv Disinfection Robhoti
Uv Chiedza Disinfection Robhoti
Uv Chiedza Sterilization Chipatara
UV Chiedza Sterilizer
Uv Chiremba Disinfection Robhoti
Uv Sterilizer Mhepo
Uv Sterilizer Chipatara
Uvc Disinfection Robhoti
Uvc Chiedza Sterilizer Chipatara
Uvc Robhoti Disinfection
Uvc Sterilization Robhoti
Xenon Uv Dsinfection Robhoti
Kumusoro Flat Irradiation UV Mwenje AirH-B100
Yakakwira Yakadzika Flat Irradiation Mhepo Disinfector MhepoH -...
Nhare yemhepo laminar kuyerera muchina AirH-Y4000H
Nhare Yemhepo Kunatsa Disinfector AirH-Y1000H
AI Germ-kuuraya Mabhoti AIStrike